केटाहरु सबैभन्दा पहिले केटीको कुन- कुन अंग्गमा आँखा पुर्याउँछन् ? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ माघ १४, मंगलवार १४:१३
धेरै वैज्ञानिकहरू र मनोवैज्ञानिकहरूले यसमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन्, आखिरमा किन समाजका दुई अभिन्न अंगहरू, जस्तै पुरुष र महिला एक अर्काप्रति आकर्षण हुन्छन् ।
महिला सधैं पुरुषहरु लाई आकर्षित गरिएका हुन्छन् । कोलम्बिया युनिभर्सिटि र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटि लगायत धेरै विश्व प्रसिद्ध संस्थाले पनि पुरुषले महिलामा पहिले खोज्ने कुराको बारेमा अनुसन्धान गरेका छन्।
पुरुषहरूले पहिले महिलाको शरीरमा कुन अङ्गमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् ?
वास्तवमा शरीरमा रहेका हर्मोनहरूमध्ये कुनै एक बढि जिम्मेवार हुन्छ। वास्तवमा, भन्नुपर्दा महिलाको शरीरमा यस्तो प्रकारको हर्मोन हुन्छ जसलाई इस्ट्रोजेनको रूपमा चिनिन्छ र पुरुषहरूको शरीरमा रासायनिक टेस्टोस्टेरोन रहेको हुन्छ। यी दुबै हार्मोनहरूले एक अर्काप्रति आकर्षण गराउने काम गर्दछन् ।
आज हामी तपाईलाई जानकारि गराउँदै छौ, महिलाहरुको कुन भागले पुरुषको ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
पुरुष किन महिलाको आँखा देख्न चाहान्छन् भन्नु भन्दा पहिले नेपालको सांगितिक जगतमा निक्कैनै चर्चामा रहेको मबिबि शाहाको रचना दिपक जंगमको संगित र गुलाम अलीको श्वरमा रहेको गीत सुन्न सकिन्छ “गाजलु ति ठुलाठुला आँखा तीर बनि बस्यो यो दिलैमा” जब कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई देख्छ, उसको पहिलो नजर महिलाको आँखामा हुन्छ। आँखा जुधेपछि मात्र हृदयहरू भेट्टाइन्छ भन्ने बिद्वानहरुको तर्क छ। यसको कारण यो हो कि आँखा यस्तो प्रेमको प्रतिक हो जसबाट जीवनको सारा भाव केहि नबोलिकन बुझ्न सकिन्छ ।
यही कारणले गर्दा महिलाले आफ्नो अनुहारको सुन्दरताका साथै गाजल, आइब्रोको साथ आँखा लाई सुन्दर र आकर्षक बनाउने गर्दछन्। आँखाले पतिलाई पत्नीको प्रेममा बाँध्छ। प्रेमिकाको आँखा एउटा यस्तो चिज हो, जसको लागि प्रेमी मर्न तयार हुन्छ ।
नेपालीमा मात्र होइन हिन्दि चलचित्रहरूका गीतहरू पनि आँखाका लागि धेरै गीत बनेका छन्, ती मध्ये सबैभन्दा प्रसिद्ध ‘तेरी आँखों के शिव क्या क्या है’ ,’ये ताल सी निले नयन’,’ये आँखों देख हम तेरी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं’ “इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं”…….
पुरुषको दिमागमा महिलाको शरीरप्रति आकर्षण सिर्जना गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने अर्को मुख्य अंग हो कम्मर । मनोविज्ञानको एउटा नियम यस्तो छ कि जोसँग केही छैन उसले सधैँ त्यो वस्तुलाई हेर्ने गर्दछ । किनकि केटीहरूको कम्मर धेरै आकर्षक हुन्छ र एकदम फराकिलो पनि हुन्छ, त्यसकारण, केटाहरूको आँखा निश्चित रूपमा केटीको कम्मरमा जान्छ।
प्रत्येक पुरुषको आँखा निश्चित रूपले केटीको छातीमा जाने गर्दछ यसको कारण के हो भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले यसलाई अहिलेसम्म बताउन सकेका छैनन्। कविहरु यस बारेमा धेरै कुरा गरेका छन्। उनीहरू भन्छन “यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो मुटु धड्किरहेको हुन्छ।”
सुन्दर ओठहरू सबै मानिसहरूले मन पराउँछन्, त्यसैले केटाहरूको आँखा पनि केटीको ओठमा जान्छ। यसैकारण धेरै अभिनेत्रीहरूले ओठको शल्यक्रिया गरेर उनीहरूको ओठलाई बढी आकर्षक बनाएका छन् । एन्जेलिना जोलीले शल्यक्रियाको साथ आफ्नो ओठलाई सुन्दर बनाएदेखि नै ओठको शल्यक्रियाको क्रेज एकदमै बढेको हो ।
भनिन्छ कि जब मुस्कान हुँदैन केटी वा महिलाको सुन्दरता हराउँछ । जुन महिलाको मुस्कान सुन्दर हुन्छ त्यहाँ केटाहरु आफ्ना सम्पुर्ण कुराहरु त्याग्न तयार हुन्छन् । केटि वा प्रेमीकाको मुस्कानका लागी नै यो दुनियामा धेरै गीत गाईएका छन् । ‘तिम्रो मुस्कान भन्दा मिठो अर्को खुसि कहाँ छ र ?’,’मिठो तिम्रो मुस्कानैमा……।’, ‘दन्तैमा नानि दन्तैमा, मोहनिपो छ कि क्याहो तिम्रो दन्तैमा’,
पुरुष र केटाहरूले महिलाको हेयरस्टाइलमा केटीहरूलाई हेर्छन्। तपाईंलाई छक्क लाग्नेछ कि एक सर्वेक्षणमा, धेरैजसो पुरुषहरूले भने कि तिनीहरू लामो कपाल भएको केटीहरू मन पराउँछन्।